क्रिकेट सिरिजमा नेपाल पराजित हुदै नेदरल्यान्ड्स फाइनल नजिक – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. क्रिकेट सिरिजमा नेपाल पराजित हुदै नेदरल्यान्ड्स फाइनल नजिक – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
क्रिकेट सिरिजमा नेपाल पराजित हुदै नेदरल्यान्ड्स फाइनल नजिक
त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएकाे छ । नेपालले दिएको २ सय ७ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै पाहुना टोली नेदरल्यान्ड्स राजधानीमा जारी त्रिकोणात्मक शृखंलाको फाइनल नजिक पुगेको छ ।
मलेशियाविरुद्धको खेलमा सतकीय पारी खेलेका म्याक्स ओ डोड ९ रनमा पवेलियन फर्किदाँ बेन कुपरले ५५ रनको अर्धसतकीय इनिङ खेले । टोविस भिसे १५ रनमा आउट हुँदा कप्तान पिटर सिलारले १५ बलमा ३१ रनको व्यक्तिगत स्कोर बनाए । नेदरल्यान्ड्सको ७ विकेट निकाल्दा नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले सर्वाधिक ४ विकेट लिए भने करण केसी, अविनाश बोहोरा र कुशल मल्लको नाममा एक/ एक विकेट रह्यो ।
यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै २० ओभर खेलेर २ सय ६ रन जोडेको थियो । अघिल्ला दुई खेलमा अर्धसतकीय इनिङ खेलेका कुशल भुर्तेलले तेस्रो खेलमा पनि अर्धसतकीय इनिङलाई निरन्तरता दिए । ४६ बलको सामना गरेको कुशलले ८ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै व्यक्तिगत ६२ रनको योगदान गरेका थिए । अर्का ओपनर आशिफ शेख भने शून्यमा पवेलियन फर्किए । त्यसपछि ब्याटिङमा आएका ज्ञानेन्द्र मल्ले २० रन जोड्दा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ६० रनको पारी खेल्दै नेपालको इनिङलाई सम्हालेका थिए । कुशल मल्ल १८ रन जोड्ने क्रममा बाउन्ड्री लाइनमा क्याच हुँदा सोमपाल कामी २१ रनमा अविजित रहेका थिए ।
नेपालको ६ विकेट निकाल्न नेदरल्यान्ड्का पिटर सिलार र विविअन किङ्गमाले समान २/२ विकेट लिए । त्यस्तै बास डे लीड, आर्यन दत्तले १/ १ विकेट आफ्नो नाममा लेखाए । शृखंलामा बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेशियाबीच दोस्रो खेल हुनेछ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 20, 2021 April 20, 2021 113 Viewed